Qalabka Gudbiyaha TV-ga Analog, Gudbiyaha TV-ga VHF UHF, Gudbiyaha Saldhigga TV
Qiimaha (USD): 35229
Rarida (USD): 155
Wadarta (USD): 36779
gudbiyaha CZH518A-3KW 3000W waa gudbiyaha TV-ga analooga ah ee gobolka-adag. Waxay qabataa kicinta TV-ga xirfadda leh waxaana lagu rakibay 19-inch chassis, kaas oo ku habboon dhammaan heerarka TV-ga. Intaa waxaa dheer, qaabeynta hal ama laba jibbaaran ayaa loo isticmaali karaa beddelaad toos ah. Waxay leedahay hawlo sax ah oo badan oo toosan iyo toosan aan toos ahayn, daminta inta jeer ee sidaha, iyo leexinta saxda ah (oo leh isha tixraaca saxda ah ee dibadeed). Waxa ay diyaarin kartaa oo ay xakamayn kartaa wax soo saarka tamarta nuska ah waxayna leedahay kontoroolka fog iyo is-dhexgalka telemetry. Cod-weyneyuhu wuxuu isticmaalayaa LDMOS FET analogga iyo dhijitaalka ah ee ku habboon baahinta TV-ga. Marka la eego qalabka, qalab koronto oo isbarbar socda oo tayo sare leh ayaa la isticmaalaa. Cod-weyneeye korantada iyo sahayda korontadu waxay adeegsadaan qalabka is-beddelka kuleylaha ah. Shaashadda taabashada ugu weyn waxay soo bandhigaysaa cabbirrada shaqada ee mashiinka oo dhan iyo moduleka cod-weyneeye (PA) wakhtiga dhabta ah. Qalabka cod-weyneeye wuxuu muujin karaa cabbirrada shaqada wakhtiga dhabta ah. Mashiinka oo dhami wuxuu leeyahay hawlo ilaalin xad dhaaf ah, kulayl xad dhaaf ah, awood xad dhaaf ah, iyo joogitaanka saamiga mowjadaha. Sidaa darteed, luminta awoodda iyo mawjada taagan ee hal mar oo ah koronto-soo-saarka tamarta ayaa ah mid aad u yar, oo leh khasaare hoose iyo waxtar sare leh.
CZH518F-3KW waa hal-kanaal adag VHF / UHF gudbiyaha TV-ga analogga ah, muuqaal iyo maqal wada jir ah.
Saddex qaabaynta qaabaynta oo aan badnayn: naqshadaynta dib u habeynta exciter, naqshadaynta kordhinta korantada, naqshadaynta korontadu waxay yarayn kartaa heerka aan shaqaynayn ilaa eber. Tani waxay ka dhigan tahay in marka kicinta ugu weyni ay guuldareysato, ay u bedeli karto heeganka heeganka si joogto ah; amplifiers badan oo awood ah ayaa la isku daray, iyo modules-ka cod-weyneyayaashu aad ayay u siman yihiin.
Labada xamaasad ayaa midba midka kale u taagan yahay oo ay fududahay in la beddelo; waxaa lagu siiya sahay koronto oo badan oo isbarbar socda, kombuyuutarku wuxuu la socon karaa oo si toos ah u hagaajin karaa xaaladda shaqada ee sahayda.
Nidaamka maamulka iyo la socodka garaadka, oo ku qalabaysan interface-ka PC-ga shabakad dibadda ah. Software-ka kantaroolka kumbuyuutarka oo si buuxda u shaqeeya, oo leh shaqada ogaanshaha tooska ah, ogaanshaha xogta farsamada, nidaamka la socodka, iyo hawlo kale.
Tallaabooyinka ilaalinta isku dhafan ee laga beddelay fikradda naqshadaynta qaab-dhismeedka waxay yarayn kartaa burburka qalabka. Mashiinkaani ma laha wax ilaalin muuqaal ah; saamiga mawjada taagan danab waa mid aad u weyn, kulaylka badan, ka badan excitation, la'aanta ilaalinta wajiga, ilaalinta hillaaca.
Voltage-ka badan, hadda-ka-badan, korantada-yar, heerkulka-ka-dhaafka ah, wareegga-gaaban, iyo ilaalinta hillaaca. Isla mar ahaantaana, dhammaan cabbirada farsamada waxaa laga akhriyi karaa LCD-ga. Dhammaan sahayda korontadu waxay ku beddelanayaan sahayda korantada oo leh hufnaan sare, kala duwanaansho la'aan ballaaran, iyo awood xooggan oo lagula qabsanayo isbeddellada danabka dibadda. Naqshadaynta kuleylka kuleylka ah waxay ka dhigaysaa cod-weyneeye korantada iyo beddelidda awoodda sahayda inay taageerto is-beddelka kulul, taas oo ku habboon ciribtirka iyo dayactirka, waxayna hagaajinaysaa kalsoonida.
Qaab dhismeed is haysta iyo muuqaal qurux badan, oo leh qaboojin xooggan oo lagu dhex dhisay.
1*CZH518F-3KW 3000W TV Gudbiyaha
Inta jeer ee shaqada: UHF 13 ~ 48 Kanaalka Doorashada Gardarada ah
Awoodda wax soo saarka: 3KW (Isku xidhan)
Cawaaqib xumo: 50Ω
VSWR ee culeyska culeyska wax soo saarka: ≤1.12
Qallooca ka dhexeeya qaabaynta: ≤-50dB
Gudbinta aan faa'iido lahayn: Kanaalka ku xiga≤-40dB
Interface wax soo saarka RF: Φ40
Korontada: Saddex waji 380V
Cabbirka qaabka: 1840mm×580mm×1150mm
Heerka soo gelinta soo noqnoqda fiidyaha: 1VP-P togan
Cidhiidhiga galitaanka soo noqnoqda fiidiyowga: 75Ω
DP: ± 5°
Iftiin aan toos ahayn: ≤10%
Daahitaanka kooxda: ≤± 60ns
Saamiga-ilaa-jabka ee faragelinta muddada-soo noqnoqota yar: ≥50dB
Heerka gelinta maqalka: 0dBm± 6dB
Cilad-gelinta maqalka: 10KΩ (dheelitir la'aan)/600Ω(Balance)
leexashada ugu badan ee soo noqnoqda: ± 50KHz
Qallooc isku mid ah: ≤1%
Sifooyinka baaxadda-soo noqnoqda: ± 1dB
Qiimaha dhoofinta ayaa si dhibyar loo xisaabiyay, fadlan nagala tasho xamuulka intaadan dalban amar.